FTC na Esochina
Wenezdee, Jenụwarị 26, 2011 Monday, September 28, 2020 Douglas Karr
Enweela ntakịrị ntakịrị akụkọ gbasara arịrịọ FTC maka ụlọ ọrụ tontanetị iji nye aka atụmatụ ndị na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ka ha ghara esoro ha. Ọ bụrụ na ịgụbeghị peeji 122 Nzuzo akụkọ, ị ga-eche na FTC na-edozi ụdị akara n'ime ájá na atụmatụ ha na-arịọ ka akpọ ya Esochila.
Gịnị bụ Esochila?
E nwere ọtụtụ ụzọ ụlọ ọrụ si agbaso omume ndị na-azụ ahịa na ntanetị. Ihe kachasị ewu ewu, bụ kuki ihe nchọgharị na-echekwa data na ozi ka gị na saịtị na-emekọrịta ihe. Cookiesfọdụ kuki bụ onye nke atọ, nke pụtara na onye na-azụ nwere ike ịdebe gafee ọtụtụ saịtị. Nakwa, enwere ụzọ iji nweta data site na Flash faịlụ… ndị a nwere ike ọ gaghị ekubi ume ma anaghị ehichapụ ha mgbe ị kpochara kuki na ihe nchọgharị gị.
Esochila bụ nhọrọ nhọrọ nke FTC ga-achọ itinye n'ọrụ nke ga-enye onye na-azụ ya ikike ịkwụsị nyocha ya. Otu echiche bụ naanị igosi mgbe a na-etinye mgbasa ozi na data esoro, na-enye ndị ahịa ohere ịpụ na nnweta data na mgbasa ozi. Ọzọ echiche si FTC bụ, kama, na-enye Naanị Oge data nwere ike iji ya na ikike onye na-eri ihe iji tinye mgbasa ozi dị mkpa.
Ọ bụ ezie na ndị FTC mere ndị a aro… na a bit nke ndumodu na ọ bụrụ na ndị ụlọ ọrụ adịghị abịa na ihe, ha nwere ike… ha na-amata repercussions nke ndị dị otú ahụ technology. Eziokwu bụ na ndị na - ere ahịa na ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị na - eji data omume eme ihe iji mepụta ahụmịhe onye ọrụ ka mma. FTC kwetara nke a site na ịsị:
Usoro ọ bụla dị otu a ekwesịghị imebi uru nke mgbasa ozi omume ịntanetị ga-enye, site na itinye ọdịnaya na ọrụ n'ịntanetị yana ịnye mgbasa ozi ahaziri iche nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ji kpọrọ ihe.
Akụkọ nzuzo ahụ gara n'ihu ikwu na ndekọ ndekọ etiti ọ bụla dị ka Emela Call Ndepụta adịghị mma, a gaghị enyocha ya dị ka azịza. Nkwupụta Nzuzo FTC, n'onwe ya, na-ewelite ọtụtụ ajụjụ dị ukwuu:
Olee otú ndị dị otú ahụ a usoro -enye nye ndị ahịa ma kpọsaa?
Olee otú ndị dị otú ahụ usoro e mere na- doro anya na usable enwere ike maka ndị ahịa?
Kedu ihe bụ ụgwọ na uru nke inye usoro ahụ? Dịka ọmụmaatụ, ole ndị na-azụ ahịa
nwere ike ịhọrọ izere ịnweta mgbasa ozi ezubere iche?
Olee otú ọtụtụ ndị na-azụ, na zuru na pasent ndabere, ka tinye n'ọrụ na pụọ na ngwaọrụ nyere ugbu a?
Kedu ihe nwere ike ime mmetụta ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-azụ ahịa ịhọrọ iji pụọ?
Kedụ ka ọ ga-esi metụta ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na ndị mgbasa ozi n'ịntanetị, oleekwa otu ọ ga-esi metụta emetụta ndị ahịa?
Kwesịrị echiche nke a usoro nhọrọ zuru ụwa ọnụ agbatị karịa mgbasa ozi omume na ntanetị ma tinye, dịka ọmụmaatụ, mgbasa ozi omume maka ngwa mkpanaaka?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nkeonwe anaghị etinye usoro nhọrọ dị mma nke afọ ofufo n'afọ ofufo, kwesịrị FTC kwadoro iwu chọrọ usoro dị otú ahụ?
Ya mere… ọ dịghị ihe mere masịrị anyị n'oge a. Esochila abughi ihe doro anya. Ihe m chere bụ na ọ gaghị eme ka ndị mmadụ nabata ya. Kama, amụma m bụ na akụkọ ahụ ga-eduga na nzuzo na ntọala nsuso na saịtị (attn: Facebook). Nke ahụ abụghị ihe dị njọ, echere m na ọtụtụ ndị ahịa ziri ezi nwere ekele maka nkwupụta nzuzo na njikwa nzuzo doro anya.
Ọ ga-amasị m ịhụ n'onwe m ihe nchọgharị ka m were ụfọdụ osisi na ịba ozi na-enye ndị ọrụ nzaghachi doro anya mgbe a na-achịkọta data ha, onye na-echekwa ya, yana otu esi eji ya iji gosipụta mgbasa ozi dị mkpa ma ọ bụ ọdịnaya siri ike. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ụfọdụ ụkpụrụ, ọ ga-abụ nnukwu ọganihu maka ma ndị ahịa ma ndị ahịa. Maka ozi ọzọ, gaa na Esochila mmekorita weebụsaịtị.
Tags: akpọlaadala egwuftcnaanị n'oge